Ọ bụghị Usoro Ọdịnaya Ọ bụla Ọ Dị Mkpa Akụkọ | Martech Zone
Akụkọ n’akụkụ niile, m na-arịa ya. Ọ bụla na-elekọta mmadụ media na-eji ngwa na-agbalị-atụba ha ihu m, ọ bụla na ebe nrụọrụ weebụ na-agbalị ịrata m ka ha clickbait akụkọ, na ugbu a ọ bụla ika chọrọ mmetụta uche jikọọ na ntanetị. Biko mee ka ọ kwụsị.
Ebumnuche Mere M Ji Ike Ike Ike Akụkọ:
Imirikiti mmadụ bụ egwu na-akọ akụkọ.
Otutu ndi mmadu adighi achọ akụkọ. Kwesie ike!
Amaara m na m ga-ewe iwe ndị ọkachamara ọdịnaya dị ebe ahụ na-enwe mmasị ịbụ abụ, na-ewulite eziokwu, ma jide mmetụta nke ndị na-ekiri ha, ndị na-ege ha ntị, ma ọ bụ ndị na-agụ akwụkwọ.
Onweghị ihe dị mma karịa nnukwu akụkọ nke onye nwe akụkọ na-akọ. Mana ịchọta nnukwu akụkọ ma ọ bụ nnukwu akụkọ akụkọ ịkọ ya dị obere. Ndị na-akọ akụkọ dị elu kwupụtara uru nke ịkọ akụkọ dị ukwuu n'ihi na ọ bụ azụmahịa ha!
Nke ahụ nwere ike ọ gaghị abụ gị azụmahịa.
Google mere otutu nyocha banyere ihe kpaliri ndi mmadu ime ihe na ntaneti, na 4 oge dị iche iche ebe azụmahịa na ndị na-azụ ahịa mere ihe.
N'ezie, ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa nwere oge iji kirie, gee ntị, ma ọ bụ gụọ akụkọ, ha nwere ike itinye aka na njirimara gị n'ịntanetị. Mana m ga - arụ ụka na nke a bụ obere. Ekwenyere m na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na-akwado mbido m. Otu ihe atụ bụ uto ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ na ewu ewu nke (ihe na-erughị nkeji 2) vidiyo vidiyo "otu-esi" na ntanetị. Ndi mmadu achoghi akuko, ha choro osisa nye nsogbu ha.
Anaghị m ekwu na ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịhapụ ịkọ akụkọ kpamkpam. Mgbe anyị mere nyocha ma mepụta akụkọ na-akpali akpali, akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ ọcha anyị wepụtara maka ndị ahịa anyị na-eme ọpụrụiche. Agbanyeghị, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị mmadụ na-abịa ma gbanwee na saịtị ndị ahịa anyị mgbe anyị nyere azịza iji dozie nsogbu ha.
Ọ bụ ezie na iberibe ọdịnaya gị kwesịrị ịkọ akụkọ gbara ọkpụrụkpụ banyere ịdị adị nke ụlọ ọrụ gị, nke onye guzobere gị, ma ọ bụ nke ndị ahịa ị na-enyere, ịkwesịrị ịnwe isiokwu dị nkenke, nke doro anya nke na-agwa:
Olee otú idozi nsogbu.
Kedu otu ihe ngwọta gị si enyere aka idozi nsogbu ahụ.
Ihe mere ihe ngwọta gị ji dị iche.
Ihe mere enwere ike ịtụkwasị gị obi.
Otu ndị ahịa gị nwere ike isi gosi na ịkwụ ụgwọ gị.
Ihe Nlereanya 1: Teknụzụ Dị Elu, Enweghị Akụkọ
NIST bụ National Institute of Standards and Technology. Ha na-ebipụta akụkọ nyocha ogologo oge nke na-akwado atumatu na usoro maka isiokwu ndị dị ka njikwa nnweta, ịga n'ihu azụmaahịa, mmeghachi omume, ọdachi na ọtụtụ ebe ndị ọzọ. The PDFs bụ nkọwa zuru oke (dị ka akwụkwọ nyocha ọ bụla kwesịrị ịbụ), mana ọtụtụ ndị ọkachamara IT na Security kwesịrị ịghọta ụzọ - ọ bụghị ịmụ ihe niile.
Ndị ahịa anyị, Lifeline Data Centers, bụ ndị mba ụwa ghọtara dị ka onye ndu na ihe ọhụrụ na ụlọ ọrụ data data na ndị ọkachamara na nchekwa. N'ezie, ha bụ ụlọ ọrụ data nzuzo nke ruru ọkwa kachasị mkpa nke nchekwa gọọmentị etiti chọrọ - FEDRamp. Onye nchoputa Rich Banta bu otu n’ime ndi okacha mara amara n’uwa. Yabụ, kama ịhazigharị akwụkwọ niile ahụ, Rich na-akwado usoro nkọwa nke otu anyị na-akọ banyere ya wee dee ya. Ihe nlele - NIST 800-53.
Uru nke isiokwu ndị ahụ bụ na ọ na-azọpụta atụmanya ha na ndị ahịa ọtụtụ oge. Site na nrịba ama nke Rich wuru, ndị tụlere ya tụkwasịrị obi na nyocha ya. Enweghị akụkọ… na-aza nke ọma Achọrọ m ịma mkpa nke ndị na-ege ya ntị.
Ihe Nlereanya 2: Nchọpụta Bara Uru, Ọ dịghị Akụkọ
Onye ọzọ nke ndị ahịa anyị bụ ụzọ kacha mkpa maka ndị ọkachamara na-ewe ndị mmadụ ajụjụ ọnụ iji gbaa ndị na-aga ime ajụjụ ọnụ ozi ederede, kwaaji. Ọ bụ teknụzụ ọhụrụ ọhụụ na ọ nweghị onye na-achọ ụdị ikpo okwu a n'oge a. Agbanyeghị, otu ndị na-eme mkpebi na-achọ ozi ndị ọzọ na ntanetị. Anyị nyeere ndị otu ha aka nyocha ma mepụta ndepụta nke ndị ọrụ dị ọnụ ala nke ahụ na-eme ka itinye aka, njigide ma nwee nnukwu nloghachi na itinye ego.
Ọzọkwa, ọ dịghị akụkọ ọ bụla n'ebe ahụ - mana ọ bụ nyocha nke ọma, nke zuru oke, na nke bara uru na-aza Achọrọ m ime mgbe ndị were gị n’ọrụ na-achọ itinye ndị ọrụ n’ọrụ ọhụrụ.
Kedu ihe ị na-atụ anya gị?
Ọzọkwa, anaghị m eleghara ikike nke ịkọ akụkọ dị ukwuu, ana m enye ndụmọdụ na ọ bụghị naanị ngwaọrụ dị na ngwa ọrụ gị. Needkwesịrị ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka atụmanya ziri ezi. Chọpụta ihe ndị na-ege gị ntị na-achọ ma nye ha ya.
Ọ bụghị akụkọ mgbe niile.
Tags: mbanye n'ọrụọrụ perkselu techhrAchọrọ m ịzụtaAchọrọ m imeAchọrọ m ịlaAchọrọ m ịmaebe nchekwa data ndumbanyeAkụkọ nkeịkọ akụkọ
Cloudimage.io: Cached, Cropped, Resized, ma ọ bụ Watermarked Images dị ka ọrụ
Daalụ Douglas maka ozi na-ezi ozi. Amaara m na Ọdịnaya bụ eze mana ọ dịghị mkpa na ị ọdịnaya ga-abụrịrị okwu 1000 +. Ekwenyere m na ọdịnaya gị ga-enwerịrị ụfọdụ ozi pụrụ iche na ndị na-adọta ndị ọbịa. N'agbanyeghị ogologo.
Jenụwarị 13, 2018 na 10:25 PM
Na-ekwenye kpamkpam - ruo n'ókè. O siri ike ide ihe banyere isiokwu na-edeghị ya ede. You'll gha acho otutu akwukwo di elu maka isi okwu a na-acho mgbe ichoro ahia ma obu oru di n'okpuru okwu 1,000. Anaghị m ekwu na ọ bụ iwu… mana m ga-asị na ị ga-ahụ nke ọma bụ.